Abacre Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Point nke ire (naa) - isi Page
Abacre Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Point nke ire (naa)
Awarded site kasị elu-ekwe omume mba:
Abacre Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Point nke ire bụ ọgbọ ọhụrụ nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ management software maka Windows. Ọ bụ zuru ngwọta, na-amalite na-iwu si patrons, na-agwụcha na ịgba ụgwọ na ụtụ isi akụkọ. Ojii interface na-ọma kachasị n'ihi na elu ọsọ ọsọ ọsọ nke a nchebe si ka na mgbochi nke nkịtị ndudue. Ọ mere maka iji na otutu kọmputa, na e nwere pụrụ ịdabere na ala ikike na ọkwa.
The layouts nke ndị ọbịa na ụgwọ nwere ike ahaziri, na ihe omume nwere ike melite ọ bụla ego, ụtụ isi, na gratuities. Ịkwụ ụgwọ ga-anabata ego, kaadị akwụmụgwọ, ma ọ bụ akwụkwọ ndenye ego.
N'ihi na ndị njikwa, e nwere bụ ọgaranya set nke kọrọ na-egosi na a zuru foto nke ụlọ oriri na ọṅụṅụ arụmọrụ na ndụ cycles: menu oriri, ndoputa ugboro ole, awa nke elu ụlọ oriri na ọṅụṅụ ibu, busiest tebụl, kasị ike ọrụ, ịkwụ ụgwọ ụzọ, na akpaka ụtụ isi calculations.
Site standardizing dum ụlọ oriri na ọṅụṅụ management usoro, software n'ịgbanwe mma na-eje ozi ọsọ.
Ọ dị mfe iji wụnye na mfe iji. Nnọọ oké ọnụ ikikere enye ohere a software ọ bụla ga-eji na gburugburu ebe obibi site na obere ezinụlọ-nwe ụlọ oriri na ọṅụṅụ na-nnukwu ígwè.
Rịba ama: Oghere Usoro ahụ na kichin matriks na-ebi akwụkwọ, okporo osisi (akara na ụdị ngosipụta) na ego úkwù na-n'ụzọ zuru ezu na-akwado!
English , Afrikaans , Albania , Arabic , Armenian , Azerbaijani , Basque , Belarusian , Bengali , Bosnian , Bulgarian , Catalan , Cebuano , Chinese (Simplified) , Chinese (omenala) , Croatian , Czech , Danish , Dutch , Esperanto , Estonian , Filipino , Finnish , French , Galician , Georgian , German , Greek , Gujarati , Haitian Creole , Hausa , Hibru , Hindi , Hmong , Hungary , Icelandic , Igbo , Indonesian , Irish , Italian , Japanese , Javanese , Kannada , Khmer , Korean , Lao , Latvian , Lithuanian , Macedonian , Malay , Maltese , Maori , Marathi , Mongolian , Nepali , Norwegian , Persian , Polish , Portuguese , Punjabi , Romanian , Russian , Serbian , Slovak , Slovenian , Somali , Spanish , Swahili , Swedish , Tamil , Telugu , Thai , Turkish , Ukrainian , Urdu , Vietnamese , Welsh , Yiddish , Yoruba , Zulu